एनसेल लाभकर विवाद | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय एनसेल लाभकर विवाद
on: २५ माघ २०७५, शुक्रबार ०५:०८ सम्पादकीय
सर्वोच्च अदालतले ३ वर्षअघि किनबेच भएको एनसेलको शेयर स्वामित्वको पूँजीगत लाभकर किन्ने कम्पनीलाई नै तिराउन आदेश दिएको छ । देशले पूँजीगत लाभकर बापत ठूलो रकम प्राप्त गर्ने भएकाले धेरैले यसमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । अदालतको पूर्णपाठ आइसकेको छैन तर समाचारमा आएको तथ्य हेर्दा जसले यो रकम तिर्नुपर्ने हो, उसले उन्मुक्ति पाएको छ । विक्रेता कम्पनीलाई पूँजीगत लाभकर नतिराई छाडिदिने नेपालको कर प्रशासनका कारण अहिले क्रेता कम्पनीले नै यो कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबाट सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जाने हो ? त्यसमा पनि चर्चा हुन थालेको छ । अदालतले जोसँग यो कर उठाउनै नसकिने भइसक्यो उसबाट उठाउन आदेश दिनु निरर्थक देखेको हुन सक्छ । आफू समक्ष प्रस्तुत मुद्दामा जे दाबी गरिएको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय पनि गर्न सक्तैन ।
एक्जियटाले शेयर किन्दा नै कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर नेपालका अधिकारीहरूलाई सोध्दा पर्दैन भन्ने जवाफ दिने अधिकारीहरू कसरी चोखा भए ? के उनीहरूले पूँजीगत लाभ करबारे जानेका थिएनन् ? उनीहरूलाई किन मुद्दामा विपक्षी बनाइएन ?
एनसेल नेपालकै ठूलो कर तिर्ने कम्पनीमध्ये एक हो । बढी कर तिरेकै कारण कर कार्यालयले सम्मानित पनि गरेको छ । यो कम्पनीको स्वामित्व नर्वेको टेलियासोनेराले आजियाटालाई बेच्दा पूँजीगत लाभकर नतिर्नुमा कसको दोष हो भन्ने राम्ररी अध्ययन नै भएको पाइँदैन । टेलियाले कम्पनीको शेयर अर्कोलाई बेच्दा त्यतिखेर कर कार्यालयका अधिकृतहरूले पूँजीगत लाभ कर लिन किन प्रक्रिया थालेनन् ? आजियाटाले शेयर किन्दा नै कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर नेपालका अधिकारीहरूलाई सोध्दा पर्दैन भन्ने जवाफ दिने अधिकारीहरू कसरी चोखा भए ? के उनीहरूले पूँजीगत लाभ करबारे जानेका थिएनन् ? उनीहरूलाई किन मुद्दामा विपक्षी बनाइएन ? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेर देशलाई अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानतिर धकेल्नेहरूलाई दण्डहीनताको सुविधा दिने प्रपञ्च किन रचिएको हो ? अर्को, सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रावधान टेकेर टेलियासोनेरालाई कर तिराउन पनि सकिन्थ्यो, किनभने यो कम्पनी देखाउनका लागि केही डलर तिरेर खडा भएको कम्पनी होइन । ठूलो कम्पनी भएकाले नेपाल सरकारले यसबाट कर उठाउने विकल्प खुलै थियो । तर, उसले प्रयासै गरेन ।
व्यवसाय गरेपछि कर तिर्नुपर्छ । तर, कर कसले र कति तिर्ने भन्ने निर्णय भीडले गर्ने होइन । कर कानून अनुसार तिर्ने हो । यस्तोमा एनसेललाई कर तिराउनुपर्छ भन्दै गरिएको प्रदर्शनले विदेशी लगानीकर्तामा के सन्देश जान्छ भन्नेमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजान कत्तिको सजिलो छ भन्ने हेर्छ । अहिले एनसेलको कर विवाद नेपालकै कमजोरी हो । नेपालको लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा विश्वास नभएर विदेशमा होल्डिङ कम्पनी स्थापना गर्ने चलन देखिन्छ । कानूनमा भएका छिद्र प्रयोग गरेर विदेशमा एनसेलको स्वामित्व किनबेच भएको छ । कानूनी छिद्र सुधार गर्नतिर नलागी किन्नेलाई नै पूँजीगत लाभकर तिराउने अनौठो परिस्थिति सृजना भएको छ । यस्तोमा कोही नेपालमा लगानी गर्न आउला र ?
नेपाल ‘जोखिम अर्थतन्त्र’ हो । यस्तो अर्थतन्त्रमा केही पैसा खर्च गरेर सरकारी अधिकारीहरूलाई किन्ने र आफ्नो व्यवसाय गर्ने कम्पनी पनि हुन्छन् । लगानी सम्मेलन यस्तै लगानीकर्ता लक्षित हो भनेर सरकारी अधिकारीले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको समेत पाइन्छ । यसले नेपालमा कर प्रावधानलाई झनै विवादित बनाउने र असल व्यवसाय गर्न चाहने लगानीकर्ता भड्किने सम्भावना थप उजागर गरेको छ ।
४ बैशाख २०७६, बुधबार १४:००
एनसेल लाभकर प्रकरण
२८ चैत्र २०७५, बिहीबार ०६:२४
११ फाल्गुन २०७५, शनिबार १२:३३